Global Aawaj | नेपालमा 'फैलिन थालेको' कोरोनाको यूके भेरिअन्टबारे पाँच प्रश्न नेपालमा 'फैलिन थालेको' कोरोनाको यूके भेरिअन्टबारे पाँच प्रश्न
नेपालमा ‘फैलिन थालेको’ कोरोनाको यूके भेरिअन्टबारे पाँच प्रश्न
काठमाडौँ । केही सातायता नेपालमा पनि कोरोनाभाइरस महामारीको दोस्रो लहरको खतरा टड्कारो देखा परेको छ। प्रत्येक दिन पुष्टि भएका सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। बुधवार २४ घण्टाभित्र साढे तीन सय सङ्क्रमित फेला परेका छन् भने सघन उपचारमा ६५ अनि भेन्टिलेटरमा १३ जना रहेको जानकारी सरकारले दिएको छ।
लगातार सङ्क्रमण बढ्नुको एउटा कारण चाहिँ चाँडै सर्ने “यूके भेरिअन्ट” भनिने सार्स-कोभ-२ को नयाँ प्रकार भएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्ण पौडेलले बताएका छन्। “विगत केही हप्तामा यूके भेरिअन्टसँग मिल्दोजुल्दो प्रकारको भाइरस भेटिन थालेको छ। भारतबाट फर्किनेहरूमा एन्टिजन परीक्षण गर्दा पोजिटिभ पाइएकाहरूमध्ये नमुना परीक्षण गर्दा पनि यो भेरिअन्टसँग मिल्दोजुल्दो प्रकार भेटिएको छ,” उनले भने।
तस्बिरको क्याप्शन, नेपालले अक्सफर्ड आस्ट्राजेनेकाको खोपबाट राष्ट्रिय खोप अभियान थालेको थियो
नेपालमा अहिलेसम्म पौने तीन लाख मानिस कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भइसकेका छन्। एकचोटि सङ्क्रमण भएपछि केही समयसम्म अर्को सङ्क्रमण नहुने बताइँदै आएको छ।
तर नयाँ प्रकारको भाइरस फैलियो भने चाहिँ के होला भन्ने प्रश्नको उत्तर सजिलो छैन। पहिले सङ्क्रमित भएकालाई नयाँ भेरिअन्टले पुन: सङ्क्रमण गर्ला कि नगर्ला भन्नेबारे स्पष्ट तथ्याङ्क उपलब्ध नभएको जनस्वास्थ्यका जानकार तथा अनुसन्धानकर्ता डा. समीरमणि दीक्षितले बताए। यो प्रश्नको उत्तर दिनका निम्ति पहिले देशमा के कति प्रकारका भाइरसहरू फैलिरहेका छन् भनेर जान्न जरुरी हुने सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनूप सुवेदी बताउँछन्।
चिनियाँ खोपबारे धेरै जानकारी प्राप्त नभए पनि आस्ट्राजेनेका खोपबारे हालसम्म यूके, अमेरिका तथा युरोपबाट प्राप्त जानकारीले यूके भेरिअन्टमा पनि यसले काम गर्ने जनाइएको छ। “नयाँ भेरिअन्टमा यसले काम गर्दैन भन्ने चाहिँ देखिएको छैन। आस्ट्राजेनेका कम्पनीले पनि उसको खोप यसमा काम गर्छ भनेको छ,” डा. दीक्षितले बताए। डा. सुवेदीका अनुसार पनि यूके भेरिअन्ट मात्रैको हकमा खोपले काम गर्ने तर अन्य दक्षिण अफ्रिकी वा ब्रजिल भेरिअन्ट वा भारतकै अन्य उत्परिवर्तित भाइरस फैलिएको हो भने ठ्याक्कै भन्न गाह्रो हुन्छ।
अहिले नेपालमा केवल एक मात्रा खोप मात्रै दिइएको छ। “एक मात्रा मात्रै खोप लिएकोहरूलाई रोग सर्ने जोखिम ६५-७० प्रतिशत कम हुन्छ भनिएको छ, तर त्यो केवल तीन महिनाका लागि मात्र हुनसक्ने ठानिन्छ। तीन महिनापछि के हुन्छ भन्ने तथ्याङ्क हामीसँग छैन,” डा. सुवेदीले बताए।
यूके भेरिअन्ट हो कि भनेर सङ्केत दिन अहिलेकै पीसीआरको विशेषीकृत प्रणालीबाट नमुनामा एस जीन नभएको पाइएमा त्यसमा उक्त भेरिअन्ट हुन सक्ने बलियो आधार ठान्ने गरिन्छ। यस्ता परीक्षण सीमित ठाउँमा मात्र उपलब्ध हुन्छन्। तर के सर्वसाधारण मानिसले कोरोनाभाइरसको प्रकार जान्न आवश्यक हुन्छ त?
विज्ञहरूका अनुसार कुन प्रकारको भाइरस फैलिएको छ भनेर जान्न विशेषगरी सरकार तथा नीतिनिर्माताहरूलाई जरुरी हुन्छ। जनस्वास्थ्यको योजना बनाउन, तदनुरूप तयारी गर्न अनि कुन खोप लगाउने भनेर निर्णय गर्न समुदायको कस्तो प्रकारको भाइरस फैलिएको छ भनेर व्यापक रूपमा अनुगमन भइरहनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
उपचार तथा निदानका निम्ति पनि प्रकारबारे जान्न आवश्यक पर्ने डा. सुवेदी बताउँछन्। “पहिले सङ्क्रमित भएकालाई पनि फेरि देखिए नयाँ भेरिअन्ट हो कि भनेर जाँच्नुपर्ने हुनसक्छ। ती बिरामीलाई फरक तरिकाले उपचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ। कस्तो प्रकारको फैलिएको छ भन्ने थाहा हुन सके त्यसले कति विकराल रूप लेला भनेर पनि अनुमान गर्न सकिन्छ,” उनले भने।
“थप सुझाव के हो भने नयाँ भेरिअन्ट झनै धेरै सङ्क्रामक भएकाले हामीले यी मापदण्ड दुईगुना गम्भीरताका साथ पालना गर्नुपर्छ,” डा. सुवेदीले बताए। खोपको व्यापक उपलब्धता निकट भविष्यमै हुने कमै सम्भावना भएकाले पनि यी मापदण्ड नेपालका निम्ति अझ महत्त्वपूर्ण भएको विज्ञहरू बताउँछन्।
यूके भेरिअन्टको हकमा छिटो सर्ने भएपनि त्यो पुरानो कोरोनाभाइरसभन्दा ज्यादा घातक भएका तथ्याङ्क नआएको डा. दीक्षितले बताए।-विविसी